Baankiin Addunyaa imaammata bulchiinsa lafa magaalaa Itoophiyaa irratti qeeqa cimaa dhiheesse - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Baankiin Addunyaa imaammata bulchiinsa lafa magaalaa Itoophiyaa irratti qeeqa cimaa dhiheesse
Finfinnetti bara 2007 - 2014 jiddutti fedhiin lafaa %51’n yoo ol ka'u, baay'inni ummataa garuu %17 qofaan dabale.
Baankiin Addunyaa fi dhabbanni Tumsa Magaatotaa yaalii Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee magaalaa misoomsuu, rakkoo mana jireenyaa hiikuufi dhaabbilee xixiqqoo jajjabeessuuf godhu irratti qeeqa cimaa dhiheesseera.
Magaalaa Finfinneetti galaafannaan lafaa guddina ummataa caale, jedha gabaasni Baankii Addunyyaan dhihaate kuni. Jidduu bara 2007 hanga 2014’tti fedhiin lafaa magaalaa Finfinneetti %51’n dabale. Baay’inni ummata magaalattii garuu guddina %17 qofa kan mul’ise. Mootummaan manniin humna hiyyeessaan wolmadaalu dhiheessuu dadhabuus gabaasni kuni agarsiisa. Dhaabbileen xixiqqoofi jiddugaleeyyiinis akka yaadamee turetti carraa hujii ummataaf uumuu kan dadhaban ta’uu gabaasichi saaxile.
Itoophiyaa keessatti, akka gabaasa kanaatti, sirni lafa mootummaa gara hawaasaa daddabarsuu dadhabaa, kan iftoomina hinqabneefi sirna dhabeessa dha.
Gabaasni Baankii Addunyaa kuni kan agarsiisu Finfinnee keessa rakkoon mana jireenyaa hamaan jirachuu, manniin ijaaramanis kan sadarkaa isaanii hin eegne ta’uufi bu’uurri misoomaas hedduu dadhabaa ta’uu isaati. Projeektonni manniin jireenyaa mootummaan irratti bobba’e kan tajaajilu namoota galii ol’aanaafi jiddu-galeessaa ta’e qaban qofa jedha gabaasni kuni. Akkasittuu fedhii jiru irraa %10 qofa kan guutu. Projeektonni kondomiiniyemii biyyattiis hedduu qaliidha jechuun Baankiin Addunyaa imaammata mootummaa Itoophiyaa qeeqe.
Gabaasni kuni projeektonni manniin jireenyaa ummata lafa isaa irra buqqa’eefis faaydaa heddu kan hinqabe ta’uu isaati kan jala sarare.
Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee lafa magaala misoomsuu karoora jedhu baafatee socho’aa jira. Akka karoora kanaatti bulchiinsi magaalaa manniin lafa heektaara 136 irra jiran kan jigsu ta’uusaati kan beeksise. Manniin jigsuun wolqabatee, woggota shanan dhufan keessatti, jirattonni magaalaa 50,000 manaafi qe’ee isaanii irraa kan buqqa’an ta’uus ibseera.
Previous articleNatsaannat Guddataa fiigicha wolakkaa maratoonii Vaaleensiyaa moo’attee
Next articleXayyaarri Itoophiyaa Dabliinii gara Waashingitan balali’aa ture hatattamaan akka bu’u taasifame
galata Oct 23, 2015 At 8:00 am
mottuman waayanee ummata oromo lafa irra buuqisa.saama akkasumas arabsa …….